"Amin'ny fanetren-tena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny fahari-po mandefitra amin'ny fitiavana" - Efes. 4:2.
Manasa anao aho mba hibanjina ilay Lehilahin'i Kalvary. Banjino Izy, ilay nisatroka tsilo, nilanja ny hazo fijalian'ny henatra, ilay nidina tsikelikely tamin'ny lalan'ny fanalam-baraka. Banjino Izy, ilay Lehilahy ory sady zatra fahoriana, izay natao tsinontsinona ary nolavin'ny olona. "Nitondra ny aretintsika tokoa Izy sady nivesatra ny fahoriantsika" - Isa. 53:4. "Nefa Izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny helotsika, ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana Azy; ary ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika" - and. 5. Banjino i Kalvary mandra-pilefitry ny fonao eo anatrehan'ny fitiavana mahagaga nasehon'ny Zanak'Andriamanitra. Tsy navelany hisy zavatra tsy ho vita, mba hanandratana sy hanadiovana ny olona lavo.
Tsy tokony hifona Aminy ve isika? Moa ve hampitotongana izay mandray Azy ny fivavahana amin'i Kristy? Tsia, tsy hampitotongana ny fanarahana ny dian-tongotr' ilay Lehilahin'i Kalvary. Andeha hipetraka eo an-tongotr'i Jesôsy isan'andro isika ka hianatra Aminy mba hanehoana ao anatin'ny resaka ataontsika, sy ny fitondran-tenantsika, ny fomba fitafintsika, ary ny asa rehetra sahanintsika fa Izy no manjaka eo amintsika. Miantso antsika Andriamanitra mba hizotra amin'ny lalana izay natokana ho an'ny navotan'ny Tompo, fa tsy hizotra amin'ny lalan'izao tontolo izao. Aoka isika hanolotra ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra ary hanambara an'i Kristy eo anatrehan'ny olona.
"Fa na zovy na zovy no handa Ahy eo anatrehan'ny olona, dia holaviko kosa izy eo anatrehan'ny Raiko Izay any an-danitra" - Mat. 10:33. Moa ve isika manan-jo hilaza ny tenantsika ho Kristianina kanefa manda ny Tompontsika eo amin'ny fiainantsika sy ny fanaontsika? "Ary izay tsy mitondra ny hazo fijaliany ka tsy manaraka Ahy dia tsy miendrika ho Ahy. Izay mamonjy ny ainy no hamery azy; aty izay mamery ny ainy noho ny amiko dia hahazo azy" - and. 38,39. Mila manda ny tenantsika isan'andro isika, ary milanja ny hazo fijaliana ka manaraka ny dian'ny Tompo.
Enga anie mba ho tonga aminao ny batisan'ny Fanahy Masina, mba ho vonton'ny Fanahin'Andriamanitra ianao. Rehefa izany dia hitombo isan'andro ho araka ny endrik'i Kristy ianao, ary eo amin'ny asa rehetra ataonao dia hipetraka ny fanontaniana hoe: "Hanome voninahitra ny Tompoko ve izany?" Amin'ny alalan'ny faharetantsika amin'ny fanaovan-tsoa no hikatsahantsika ny voninahitra sy ny dera ka handraisana ny fanomezan'ny tsy fahafatesana mandrakizay. — RH, 10 May 1892.